“မြင်မြင်ချင်း အချစ်” ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ရှိလာမှာ မဟုတ်တဲ့ Sapiosexual တို့အကြောင်း – For her myanmar
“မြင်မြင်ချင်း အချစ်” ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ရှိလာမှာ မဟုတ်တဲ့ Sapiosexual တို့အကြောင်း
Posted on June 10, 2019 June 10, 2019 Author Wathun	Comment(0)
ရုပ်ရည်တွေ ဘောဒီတောင့်တာတွေက ကိုယ့်ကို မဆွဲဆောင်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေသလား ? ဒါဆို ဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ကြည့်ဖို့ လိုနေပါပြီ ။
Pensexual တို့ Bisexual တို့လို အသုံးအနှုန်းမျိုးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Sapiosexual ဆိုတာကို ကြားဖူးကြလားဟင် ယောင်းတို့?? Sapiosexual ဆိုတာကတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုကိုပဲ ကြွေကျတတ်ကြတဲ့သူတွေလို့ပဲ လွယ်လွယ် ပြောကြပါစို့ရဲ့…
ဆိုလိုတာက ယောင်းရယ်… လူတစ်ယောက်ကို ယောင်းတို့ကြည့်လိုက်… ယောင်းအတွက် သူတို့ မျက်လုံးလေးတွေက ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် အပြုံးလေးတွေကို ကြွေရတာလား၊ နွေးထွေးတဲ့ အပြုအမူလေးတွေကို မြတ်နိုးတာလား… ဘာကိုပဲ သဘောကျကျ ကိုယ်သဘောကျတဲ့ အရာလေးတွေကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်း အချစ်စိတ်တွေ တိုးလာတယ်ဟုတ်? Sapiosexual တွေကျတော့ တစ်ဖက်လူရဲ့ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်မှုတွေကြောင့် မြတ်နိုးမှုတွေ ပိုရပါတယ်တဲ့… ကဲ.. ဒါဆို ယောင်းက Sapiosexual ဖြစ်နေမလား ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ? မင်မင်တို့ သိပ္ပံနည်းကျကျ ပြောကြည့်ကြရအောင်…
၁။ ထားခဲ့သမျှ RS တွေအားလုံးဟာ သူငယ်ချင်းဘဝကနေ စတာချည်းပါပဲ။
မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိတယ်ဆိုတာ Sapiosexual တွေမှာ မရှိပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့ ဝါသနာတူရာ၊ စိတ်ဝင်စားမှုချင်း တူရာ၊ အတွေးအခေါ်ချင်းတူရာ လူတွေနဲ့သာ စကားပြောဖြစ်ပြီး ကိုယ့်အတွက် သက်တောင့်သက်သာ အဖြစ်ဆုံးသူကိုသာ ချစ်သူအဖြစ် ရွေးချယ်ကြသူတွေပါ။ အဲ့တော့ အားနည်းချက်က ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ ဒီ Relationship မှာ စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်စရာ စပရိုက်စ်တွေ၊ ရိုမှုတွေ နည်းတာပါပဲနော်…
Related Article >>> သေအတူ ရှင်မကွာ ချစ်ခြင်းဆိုတာကို သက်သေပြသွားခဲ့တဲ့ ဒုစရိုက် လူသတ်စုံတွဲ
၂။ ချစ်ခွင့်တောင်းလာလို့ စဉ်းစားမယ့်အခါ ထိပ်ဆုံးကစဉ်းစားမိတာ သူ့ဉာဏ်ရည် နဲ့ အတွေးအခေါ် ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာပါပဲ။
စာတော်မှလို့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်… ကိုယ်နဲ့ ဘာသာစကားချင်း ညီသလားဆိုတာကို အရင်စဉ်းစားကြတာပါ။ ကိုယ့်ထက် မတွေးနိုင်၊ မစဉ်းစားနိုင်တောင် ကိုယ်နဲ့ အမီလိုက်နိုင်သူတွေကိုသာ သဘောကျကြပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင်- ငွေရှိမရှိဆိုတာထက် ငွေရှာနိုင်တဲ့ အရည်အချင်း ရှိမရှိဆိုတာမျိုးကို အရင်ကြည့်ကြသူတွေပေါ့..
၃။ လူတစ်ယောက်ကို သဘောကျဖို့ အတော်ခက်ခဲပါတယ်။
ဘာလို့လဲ? Sapiosexual တွေက လူတိုင်းကို သဘောမကျကြပါဘူး။ သူတို့ တကယ်ကြီး အရမ်းသဘောကျတဲ့သူဆိုတာ အတော်လေး ရှားပါတယ်။ အဲ.. တကယ်လို့များ သဘောကျလို့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သွားကြပြီဆိုရင်လည်း တော်တော်ကြီး တွယ်တာတတ်တဲ့သူမျိုးတွေပါ။ ကြာလေ ကြာလေ တွယ်တာလေ ဆိုတာမျိုးပေါ့…
၄။ အထိအတွေ့နဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှုတွေထက် အပြန်အလှန်စကားပြောရတာကို ပိုပြီး သဘောကျတတ်ပါတယ်။
အထိအတွေ့မှာ မသာယာတဲ့သူဆိုတာ အတော်ရှားတယ်ဆိုရမှာပါ။ အဲ.. အလှမကြိုက်တဲ့သူရော ဘယ်သူရှိလဲ မေးလေနော်… ကိုယ့်မျက်စိရှေ့ အလှတရားလေး မြင်နေရတာ မကြိုက်တဲ့သူ ရှိလားပြော… ဒါပေမဲ့ Sapiosexual တွေအတွက်တော့ ဒီအလှတရားတွေ အထိအတွေ့တွေဟာ ခဏတာပဲ ဆွဲဆောင်နိုင်မှာပါ။ တကယ့်တကယ် သူတို့ကို ဆွဲဆောင်နိုင်တာက သူတို့အတွေးအခေါ် ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ၊ ဗဟုသုတ ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာပါပဲ။
Related Article >>> ရူးရူးမူးမူးချစ်ခြင်းဟာ ရောဂါတစ်ခုလား?
၅။ ရူးမိုက်တဲ့ အပြုအမူတစ်ခုကြောင့် လမ်းခွဲရတဲ့ထိ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
ဥပမာ – “ဟိုကောင်က ခဏက ချစ်ကို ကြည့်နေလို့ ကိုယ် သွားထိုးလာတယ်”၊ “မင်းမှ ပြန်မချစ်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေလိုက်မှာ” ဆိုတာမျိုးနဲ့ Sapiosexual တွေကို ရင်ခုန်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ထင်ရင်တော့ အလွဲကြီး လွဲပါလိမ့်မယ်။ အဲ့လို ဉာဏ်မရှိတဲ့ အပြုအမူတွေ၊ ရူးမိုက်တဲ့ အပြောအဆိုတွေက ဝေးကွာဖို့အတွက် သော့ချက်ကြီးပါပဲ။ တစ်ခါလောက် လုပ်မိလိုက်တာနဲ့ စိတ်ကုန်သွားဖို့ ရာနှုန်း ၈၀ ပါ။ ကိုယ့်ခံစားချက်ကို ကိုယ်သိနေပြီး ဒါတွေကို ဖြတ်ထိုးဉာဏ်သုံး၊ သိမ်မွေ့တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ဖော်ပြတတ်တာကိုက Sapiosexual တွေကို ကြွေအောင်လှုပ်နိုင်မယ့် အကွက်ပါ။
ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေမယ်ဆိုရင် ယောင်းဟာ ဉာဏ်ကောင်းထက်မြက်သူတွေကိုမှသာ သဘောကျတဲ့ Sapiosexual တွေပါပဲ။ ဘယ်လောက် ချောနေ၊လှနေပါစေ၊ ဘယ်လောက်ပဲ အထာကျနေပါစေ၊ ဘယ်လိုအပြောကောင်းနေပါစေ၊ အဲဒီသူက မထက်မြက်ဘူးဆိုရင် တစ်စိုးတစ်စိမှ သဘောမကျတတ်တဲ့ Sapiosexual တွေအတွက် လက်တွဲဖော်က အတော်လေး ရှာရခက်ခဲနိုင်တာမို့ Single ဖြစ်နေကြတာလည်း များမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ တွဲမိပြီ၊ တကယ်ချစ်မိပြီဆိုလည်း မြဲတတ်ကြတာမို့ သာယာတဲ့ အချစ်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ကြရတာ များပါတယ်တဲ့ ယောင်းတို့ရေ..
ကဲ..ယောင်းက Sapiosexual ဟုတ်ရဲ့လား?
References : Ideapod ,Thought Catalog
ရုပျရညျတှေ ဘောဒီတောငျ့တာတှကေ ကိုယျ့ကို မဆှဲဆောငျနိုငျဘူး ဖွဈနသေလား ? ဒါဆို ဒီဆောငျးပါးကို ဖတျကွညျ့ဖို့ လိုနပေါပွီ ။
Pensexual တို့ Bisexual တို့လို အသုံးအနှုနျးမြိုးတဈခုဖွဈတဲ့ Sapiosexual ဆိုတာကို ကွားဖူးကွလားဟငျ ယောငျးတို့?? Sapiosexual ဆိုတာကတော့ လူတဈယောကျရဲ့ ဉာဏျရညျထကျမွကျမှုကိုပဲ ကွှကေတြတျကွတဲ့သူတှလေို့ပဲ လှယျလှယျ ပွောကွပါစို့ရဲ့…
ဆိုလိုတာက ယောငျးရယျ… လူတဈယောကျကို ယောငျးတို့ကွညျ့လိုကျ… ယောငျးအတှကျ သူတို့ မကျြလုံးလေးတှကေ ဆှဲဆောငျမှု ရှိနတောလား၊ ဒါမှမဟုတျ အပွုံးလေးတှကေို ကွှရေတာလား၊ နှေးထှေးတဲ့ အပွုအမူလေးတှကေို မွတျနိုးတာလား… ဘာကိုပဲ သဘောကကြ ကိုယျသဘောကတြဲ့ အရာလေးတှကေို တစိမျ့စိမျ့ကွညျ့ရငျး အခဈြစိတျတှေ တိုးလာတယျဟုတျ? Sapiosexual တှကေတြော့ တဈဖကျလူရဲ့ ဉာဏျရညျထကျမွကျမှုတှကွေောငျ့ မွတျနိုးမှုတှေ ပိုရပါတယျတဲ့… ကဲ.. ဒါဆို ယောငျးက Sapiosexual ဖွဈနမေလား ဘယျလို သိနိုငျမလဲ? မငျမငျတို့ သိပ်ပံနညျးကကြ ပွောကွညျ့ကွရအောငျ…
၁။ ထားခဲ့သမြှ RS တှအေားလုံးဟာ သူငယျခငျြးဘဝကနေ စတာခညျြးပါပဲ။
မွငျမွငျခငျြး ခဈြမိတယျဆိုတာ Sapiosexual တှမှော မရှိပါဘူး။ ကိုယျနဲ့ ဝါသနာတူရာ၊ စိတျဝငျစားမှုခငျြး တူရာ၊ အတှေးအချေါခငျြးတူရာ လူတှနေဲ့သာ စကားပွောဖွဈပွီး ကိုယျ့အတှကျ သကျတောငျ့သကျသာ အဖွဈဆုံးသူကိုသာ ခဈြသူအဖွဈ ရှေးခယျြကွသူတှပေါ။ အဲ့တော့ အားနညျးခကျြက ဘာဖွဈလာလဲဆိုတော့ ဒီ Relationship မှာ စိတျလှုပျရှားရငျခုနျစရာ စပရိုကျဈတှေ၊ ရိုမှုတှေ နညျးတာပါပဲနျော..
Related Article >>> သအေတူ ရှငျမကှာ ခဈြခွငျးဆိုတာကို သကျသပွေသှားခဲ့တဲ့ ဒုစရိုကျ လူသတျစုံတှဲ
၂။ ခဈြခှငျ့တောငျးလာလို့ စဉျးစားမယျ့အခါ ထိပျဆုံးကစဉျးစားမိတာ သူ့ဉာဏျရညျ နဲ့ အတှေးအချေါ ဘယျလောကျရှိလဲဆိုတာပါပဲ။
စာတျောမှလို့ ပွောတာ မဟုတျဘူးနျော… ကိုယျနဲ့ ဘာသာစကားခငျြး ညီသလားဆိုတာကို အရငျစဉျးစားကွတာပါ။ ကိုယျ့ထကျ မတှေးနိုငျ၊ မစဉျးစားနိုငျတောငျ ကိုယျနဲ့ အမီလိုကျနိုငျသူတှကေိုသာ သဘောကကြွပါတယျ။ ဥပမာပွောရရငျ- ငှရှေိမရှိဆိုတာထကျ ငှရှောနိုငျတဲ့ အရညျအခငျြး ရှိမရှိဆိုတာမြိုးကို အရငျကွညျ့ကွသူတှပေေါ့..
၃။ လူတဈယောကျကို သဘောကဖြို့ အတျောခကျခဲပါတယျ။
ဘာလို့လဲ? Sapiosexual တှကေ လူတိုငျးကို သဘောမကကြွပါဘူး။ သူတို့ တကယျကွီး အရမျးသဘောကတြဲ့သူဆိုတာ အတျောလေး ရှားပါတယျ။ အဲ.. တကယျလို့မြား သဘောကလြို့ သူငယျခငျြးဖွဈသှားကွပွီဆိုရငျလညျး တျောတျောကွီး တှယျတာတတျတဲ့သူမြိုးတှပေါ။ ကွာလေ ကွာလေ တှယျတာလေ ဆိုတာမြိုးပေါ့…
၄။ အထိအတှနေဲ့ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ဆှဲဆောငျမှုတှထေကျ အပွနျအလှနျစကားပွောရတာကို ပိုပွီး သဘောကတြတျပါတယျ။
အထိအတှမှေ့ာ မသာယာတဲ့သူဆိုတာ အတျောရှားတယျဆိုရမှာပါ။ အဲ.. အလှမကွိုကျတဲ့သူရော ဘယျသူရှိလဲ မေးလနေျော… ကိုယျ့မကျြစိရှေ့ အလှတရားလေး မွငျနရေတာ မကွိုကျတဲ့သူ ရှိလားပွော… ဒါပမေဲ့ Sapiosexual တှအေတှကျတော့ ဒီအလှတရားတှေ အထိအတှတှေ့ဟော ခဏတာပဲ ဆှဲဆောငျနိုငျမှာပါ။ တကယျ့တကယျ သူတို့ကို ဆှဲဆောငျနိုငျတာက သူတို့အတှေးအချေါ ဘယျလောကျကောငျးလဲ၊ ဗဟုသုတ ဘယျလောကျရှိလဲဆိုတာပါပဲ။
၅။ ရူးမိုကျတဲ့ အပွုအမူတဈခုကွောငျ့ လမျးခှဲရတဲ့ထိ ဖွဈတတျကွပါတယျ။
ဥပမာ – “ဟိုကောငျက ခဏက ခဈြကို ကွညျ့နလေို့ ကိုယျ သှားထိုးလာတယျ”၊ “မငျးမှ ပွနျမခဈြရငျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သတျသလေိုကျမှာ” ဆိုတာမြိုးနဲ့ Sapiosexual တှကေို ရငျခုနျအောငျလုပျနိုငျမယျထငျရငျတော့ အလှဲကွီး လှဲပါလိမျ့မယျ။ အဲ့လို ဉာဏျမရှိတဲ့ အပွုအမူတှေ၊ ရူးမိုကျတဲ့ အပွောအဆိုတှကေ ဝေးကှာဖို့အတှကျ သော့ခကျြကွီးပါပဲ။ တဈခါလောကျ လုပျမိလိုကျတာနဲ့ စိတျကုနျသှားဖို့ ရာနှုနျး ၈၀ ပါ။ ကိုယျ့ခံစားခကျြကို ကိုယျသိနပွေီး ဒါတှကေို ဖွတျထိုးဉာဏျသုံး၊ သိမျမှတေဲ့ နညျးလမျးနဲ့ ဖျောပွတတျတာကိုက Sapiosexual တှကေို ကွှအေောငျလှုပျနိုငျမယျ့ အကှကျပါ။
ဒီအခကျြတှနေဲ့ ကိုကျညီနမေယျဆိုရငျ ယောငျးဟာ ဉာဏျကောငျးထကျမွကျသူတှကေိုမှသာ သဘောကတြဲ့ Sapiosexual တှပေါပဲ။ ဘယျလောကျ ခြောနေ၊လှနပေါစေ၊ ဘယျလောကျပဲ အထာကနြပေါစေ၊ ဘယျလိုအပွောကောငျးနပေါစေ၊ အဲဒီသူက မထကျမွကျဘူးဆိုရငျ တဈစိုးတဈစိမှ သဘောမကတြတျတဲ့ Sapiosexual တှအေတှကျ လကျတှဲဖျောက အတျောလေး ရှာရခကျခဲနိုငျတာမို့ Single ဖွဈနကွေတာလညျး မြားမှာပါ။ ဒါပမေဲ့ တှဲမိပွီ၊ တကယျခဈြမိပွီဆိုလညျး မွဲတတျကွတာမို့ သာယာတဲ့ အခဈြရေးကို ပိုငျဆိုငျကွရတာ မြားပါတယျတဲ့ ယောငျးတို့ရေ..
ကဲ..ယောငျးက Sapiosexual ဟုတျရဲ့လား?
Tagged brain, Knowledge, love, Relationship, Sapiosexual, Smart
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ မထည့်ထားသင့်တဲ့ အစားအစာ (၇) မျိုး
Posted on September 20, 2018 September 20, 2018 Author Ei Mon
နောက်တစ်ခါ ထည့်မသိမ်းမိစေနဲ့နော် ယောင်းရေ…